Ibubata ụgbọ ala si Hong Kong na UK | Importgbọ M Mbubata
You na-achọ ibubata na Hong Kong na United Kingdom?
Anyị nwere ike ijikwa usoro dum ị na-ebubata ụgbọ ala gị na Hong Kong, gụnyere mbupụ, mbupu, nnabata nnabata, nnabata ụgbọ mmiri UK, nnwale nnwale na ndebanye aha DVLA. Anyị na-edozi usoro ahụ dum, na-azọpụta gị oge, nsogbu na ụgwọ a na-atụghị anya ya.
Anyị na-ebubata ọtụtụ ụgbọ ala si Hong Kong na UK n'aha ndị ahịa anyị, nke pụtara na anyị nwere nnukwu ahụmịhe na nka maka ibubata ụgbọ gị. Anyị na-enye nnakọta ekele n'ime oke obodo mana ị nwere ike ịgbakwunye ọnụego ịnakọta ụgbọ gị site na ịga n'ihu n'ọhịa na arịrịọ gị. Anyị na-ebugharị ụgbọ ala ndị ahụ site na iji ihe eji eme ihe, nke pụtara na ị na-erite uru site na mbelata ịkwaga ụgbọ gị na UK n'ihi ịkekọrịta ọnụahịa nke akpa ahụ na ụgbọala ndị ọzọ anyị na-ebubata maka ndị ahịa. Mbupu akpa bụ ụzọ dị nchebe ma dị nchebe iji bubata ụgbọ gị na ụgbọ ala gị nọ n'aka anyị.
Mgbe ịbubata ụgbọala site na Hong Kong, e nwere ụzọ anọ dị iche iche isi kpochapụ omenala na UK, dabere na ụgbọ ala ahụ, afọ na ọnọdụ gị:
You na-alaghachi azụ dị ka onye na-ebufe onye bi na United Kingdom? Ọ bụrụ n'inwere ụgbọ ala ahụ ihe karịrị ọnwa isii ma nwee ihe akaebe nke ibi na Hong Kong na-agbatịghachi ọnwa 12 - mgbe ahụ mbubata gị ga-adabaghị na mbubata mbubata na ụtụ isi.
Maka ugbo ala ndị na-erughị afọ iri si Hong Kong, ụgbọ gị ga-ekwenye na ụdị nkwado UK. Iji mee nke a, ọ ga-adị gị mkpa ịnwale ule IVA. Anyị bụ naanị ụlọ ọrụ nyocha a na-arụ ọrụ na nzuzo na UK, nke pụtara na ị nweghị oge ichere ogologo metụtara ụlọ ọrụ nyocha gọọmentị nke ndị ọzọ na-ebubata ụgbọala UK.
Cargbọ ala ọ bụla dị iche na ndị nrụpụta ọ bụla nwere ụkpụrụ nkwado dị iche iche maka inyere ndị ahịa ha aka site na usoro mbubata, yabụ biko nweta nkọwa sitere n'aka anyị maka ibubata ụgbọ ala gị.
Anyị na-ejikwa usoro niile maka nnọchite gị, ma nke ahụ na-emekọ otu mmekorita nke ndị nrụpụta ụgbọ ala gị ma ọ bụ Ngalaba na-ahụ maka Transportgbọ njem, n'ihi ya ị nwere ike izuike na ịmara na a ga-edebanye aha gị na DVLA n'ụzọ iwu kwadoro n'oge kachasị dị mkpirikpi.
Carsgbọ ala ndị dị na Hong Kong nwere ike ịchọ mgbanwe ụfọdụ, gụnyere ịgbanye spidomita iji gosipụta MPH na ọnọdụ ọkụ foogu azụ ma ọ bụrụ na ọ kwadobeghi iwu ụwa niile.
Otu nyocha anyị nwere nnukwu ihe ọmụma banyere ụgbọ ala, na-enye ha ohere ịkọwapụta ihe dị mkpa maka mbubata gị na Hong Kong na UK.
Ihe karịrị 10-afọ ụgbọ ala na-ụdị ihu ọma hapụrụ, ma ka na-achọ MOT ule na yiri mgbanwe mkpa maka ihe IVA ule tupu aha. Mgbanwe ndị ahụ dabere na afọ mana ọ na-abụkarị ọkụ na-eso azụ.
Ọ bụrụ na ụgbọala gị karịrị afọ 40, ọ dịghị mkpa nyocha MOT ma enwere ike ibuga gị na adreesị UK gị tupu edebanye aha ya.